Anime ilay tena mampiady hevitra indrindra nahatonga ny 'hatezeram-bahoaka' - Hafa
Ireo seho Anime mampiady hevitra indrindra nahatonga ny “hatezeran'ny besinimaro”
Ny adihevitra momba ny anime dia mazàna mavesatra am-baravarana amin'ny Internet. Tsy misy na dia tena misy aza izy io.
Fa ity no fironana amin'ny anime amin'ny sehatra toa ny Twitter.
Tsy momba ny Twitter foana anefa izany. Mahazo tranokala izay miteraka resabe ianao satria izy ireo manokana fankahalana anime.
Matetika ireo tranokala (sy olona) izay tsy ao anatin'ny indostria akory. Na miahiahy kely momba ny anime amin'ny kely indrindra.
Seho Anime izay nihemotra
Ity misy lisitr'ireo seho anime mendrika hotononina izay nahatonga ny hatezeram-bahoaka.
Ary misy fanononana mendri-kaja amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Darling In The Franxx dia iray amin'ireo anime BIGGEST tamin'ny folo taona izay hitantsika. Na koa tato anatin'ny 20 taona lasa.
Tamin'ny taona 2018 dia io no anime fantatro nahatratra an very saina haavon'ny laza, azo ampitahaina amin'ny Attack On Titan tamin'izany fotoana izany.
Na i Violet Evergarden aza tsy afaka ampitahaina amin'izany, fa diso aho.
Ny tsipika malaza 'malalako' dia nampifandray ny olona rehetra tao amin'ny fiarahamonina anime. Ary i Zero Two dia lasa waifu amin'ny fotoana fohy mihitsy.
anime tsara hijerena dub anglisy
Ary avy eo dia nahazo BANNED ny D.I.T.F any Shina
' Studio Trigger sy sary A-1 'Tetikasa anime vaovao amin'ity vanim-potoana ity, DARLING ao amin'ny FRANXX , manintona betsaka ny mpankafy sy ny mpitsikera. Saingy ny ankamaroan'izany dia mifantoka amin'ny toe-javatra misy azy.
Ireo toe-javatra manome sosokevitra ireo dia nanaporofo fa mafy loatra Shina , satria noraran'izy ireo tamin'ny tranokala streaming iray ilay seho. '
Loharano: Boky tantara an-tsary.
Fantatra an'i Shina fandrarana seho maro be an-tsokosoko havia havanana sy afovoany. Satria mavesatra amin'ny fahitsiana sy fahatsapana politika amin'ny haino aman-jery i Shina.
Noraran'izy ireo i Darling In The Franxx noho ny lohahevitra ara-nofo 'mampirisika' azy ireo.
Fantatrao… ireo toa izao:
Ary vao fanombohana ihany izany
Ny dingana manaraka tamin'ny resa-be nataon'i Darling In The Franxx dia ny fandrahonana ho faty avy amin'ny fiarahamonina mihitsy.
Zero Two sy Ichigo dia nanana fizarana henjana izay nandehanan'i Ichigo nitady korontana.
IZAO no nanosika ny olona ho lasa ballistic noho ny hadalana fa tsy inona intsony rehefa voaresaka sy vita daholo.
Darling In The Franxx dia nampiady hevitra hatramin'ny voalohany. Hafahafa ireo lohahevitra manome hevitra momba ny firaisana amin'ny andiany Mecha.
Amiko izany dia ampahany tamin'ny hatsarany, saingy rehefa nandroso bebe kokoa ilay anime, vao mainka niharatsy.
Ny 'hatezerana' dia momba bebe kokoa mpiaro ny fahamarinana ara-tsosialy bullsh * t izany no mahazatra ny internet amin'izao fotoana izao. Fa izany tokoa LEHIBE nandritra ny fotoana nitrangan'izany tamin'ny taona 2018.
Goblin Slayer dia anime iray hafa izany dia nahatonga ny hatezerana sy ny hatezeram-bahoaka.
Araka ny fantatsika rehetra momba an'i Goblin Slayer - ny fizarana voalohany an'ny anime dia mampiady hevitra, mahery vaika ary voatery hikorontana SASANY olona amin'ny fomba diso.
Rehefa dinihina tokoa, ny vehivavy dia 'voahitsakitsaka' ary fantatsika rehetra ny fihetsiky ny Amerikanina amin'ny zavatra tsy tiany….
Mahatonga ny vahoaka romotra Twitter tsy hitady saina sy hitaraina momba ny fizarana voalohany. Ary ahoana no heverina fa manao firaisana ara-nofo, misogynist ary ny teny buzz rehetra any andrefana.
Toy ny tranga nanjo an'i Darling In The Franxx, tamin'ny farany dia olona tsy mpankafy rantsan-tànana anime akory manondro satria tsy nahazo zavatra tsara kokoa hatao izy ireo.
Na amin'ny teny hafa - mpanjanaka izay manandrana manery ny idealy apetrany amin'ny firenen-kafa satria tsy 'manaiky' ny kanto na ny fomba fanaovan-javatra izy ireo.
Mifandraika: Ny olana amin'ny firaisana ara-nofo Anime NOBODY te-hiaiky
Saika adinoko manokana ny momba an'io sehatra io tamin'ny vanim-potoana SAO 3. Raha somary lasa lavitra ilay sary, dia hitan'i Eugio fa voafatotra kely izy.
Toetra vehivavy roa: Tiese sy Ronye dia nifanehitra tamin'ny hafahafa roa, izay hita fa fanapahan-kevitra ratsy.
tiese sy ronye sao
fizarana zava-kanto amin'ny sabatra fizarana 10
eugio sao miala sasatra
Taty aoriana - ezahan'i Eugio 'hanavotra' an'i Tiese sy Ronye taorian'ny fahatsapany hoe inona no tetika ampiasain'ny mpampijaly azy ireo.
Noteren'i Eugio hijery tsy afa-manoatra rehefa manandrana 'manolana' ny iray amin'ireo mpilalao izy ireo mba hampitana ny hafany. Ny tanjon'izy ireo dia ny hampijaly an'i Eugio ary hametraka azy rehetra any amin'ny helo.
Araka ny fahazoako azy - ity sehatra ity dia voasivana tamin'ny serivisy mivantana sasany. Ary ny anime dia nahazo valiny be dia be tamin'izay nitranga nandritra fizarana io.
Ny Twitter mihoatra ny olon-kafa very saina ary YouTubers ny havanana ankavanana sy ny afovoany no niresaka momba izany.
Na inona na inona no fiorenanao amin'ity iray ity - tsy ratsy noho ny fizarana Goblin Slayer io. Ary ny anime roa tonta dia samy fantatra amin'ny toetrany mainty tahaka azy. Na dia ny 99% ny mpitsikera aza tsy mitovy mpankafy anime toy ny mahazatra.
Ankoatr'izay dia tsy izany.
4. Ny fiakaran'ny mahery fo mpiaro
Ny resabe ao amin'ny Rising Of The Shield Hero dia hafa kely amin'ny SAO sy Goblin Slayer. Saingy ny mahatsikaiky dia nitranga tsy ela taorian'ny izy roa (na dia nandefa tamin'ny volana Janoary 2019 aza mba ara-drariny).
Ao amin'ny fizarana voalohany amin'ity Andiany anime Isekai , Naofumi Iwatani dia ampangaina amin'ny fomba diso ho “fanolanana” sy fanorisorenana ara-nofo.
Ilay meloka - pitrandrahana manana fandaharam-potoana miafina, ary mampiasa ny adihevitra izy handravana an'i Naofumi ary hahazo tombony amin'izany mandritra izany.
Ireo karazana zavatra ireo dia mitranga amin'ny tontolo tena izy, ka r mora azo sy takatra. Indrindra miaraka amin'ireo 'feminisma' rehetra any andrefana sy ireo vehivavy misy poizina izay hanao zavatra rehetra hamongorana ny lehilahy hanana fahefana politika.
Ary na izany aza - izany no nahatonga ny fihemorana sy ny ady hevitra tamin'ny Shield Hero.
Ny ampahany tiako indrindra amin'ny Shield Hero AMA dia ny valin'ny 'ahoana ny amin'ny adihevitra' hoe 'fifanolanana inona?'
F * cking lol. pic.twitter.com/YOscFk9k2t
- Jeko (@JekoJekoUEM) 10 Febroary 2019
Tsy nisy ny fifanolanana feno hatezerana tao Japon ny fitsanganana ilay maherifo mpiaro an'i Japana, hoy ny mpamokatra Kadokawa | #ROTSH #Ny fiakaran'ny mahery fo mpiaro #Anime #BasedJapan https://t.co/jmULB2E7Xt pic.twitter.com/hSYVCgKEis
- Gamer iray Angry Gamer (@OneAngryGamerHD) 11 Febroary 2019
Vehivavy, na tokony hiteny aho - vondrona iray an'ny mpiaro tsy tia ilay hafatra.
Nandeha lavitra izy ireo nilaza fa 'tsy misy izany amin'ny tena fiainana'. Izay fantatry ny olona salama saina tsara fa tsy tena marina izany.
Ny vehivavy dia tsy manan-tsiny mandra-panaporofoina fa meloka, ny Lehilahy kosa meloka mandra-pahatongan'ny tsy fananana tsiny.
Hita taratra amin'ny lalana nanapahan-kevitr'ilay anime.
Saingy ny valin-kafatra dia tsy nohamarinina tamin'ny tetik'asa lehibe, satria indray - io no SJW’S tany andrefana manandrana manery ny idealin'izy ireo any Japon.
Ny olona izay tsy mpankafy anime akory aloha.
Mifandraika: Sarotra fa lesona ilaina amin'ny fiainana azo ianarana avy amin'ny fiakaran'ny herisetra Shield
5. Ishuzoku Reviewers
Mbola tsy anime akory io. Andian-tantara Manga izay novaina lasa anime.
Io dia nambara tao amin'ny Twitter andro vitsivitsy lasa izay.
Namoaka lahatsoratra iray momba izany aho mialoha ny famoahana ny anime amin'ny volana Janoary 2020 raha vao mivoaka.
Ny mahatsikaiky dia - io dia efa mandalo valiny kely rehefa miresaka isika.
Hainao ve fa? Naheno olona maro nitaraina momba ity fisehoana mahamenatra vehivavy ity aho saingy fantatrao izay hitako? Vehivavy samy hafa amin'ny endriny rehetra, habe, orientation ary ny vanim-potoana mitovy amin'ny itondrana azy ireo… ahitsiho aho raha diso aho fa ilay antsoina hoe 'Fitoviana' marina? #IshuzokuReviewers pic.twitter.com/yqEzgynUiB
- & # x1f3b6; Tsy misy kilema aho, asa eo amin'ny Fandrosoana & # x1f3b6; (@Soul_Resonance) 4 Novambra 2019
Ary araka ny efa azonao vinavina - ny Twitter indray no meloka. Satria 'misy' no tokony hataonao mba hisintonana ireo olona ireo ary hizotra amin'ny lafy ratsy.
Raha ny fahitana azy dia haneho ny vehivavy amin'ny fomba tsara izy io raha mikasika ireo lohahevitra saro-pady ireo (izay misy).
Na dia hanaiky aza aho amin'ity tranga ity dia azoko ny antony mahatonga ny olona 'very saina' noho ity fanambarana anime vaovao ity.
Miorina amin'ny mpivaro-tena zazavavy goavambe ny anime.
Ny mpilalao fototra dia mandeha any amin'ny trano fivarotan-tena isan-karazany misy foko isan-karazany amin'ny zazavavy, mba hahafahany manapa-kevitra hoe karazana vehivavy inona no 'tsara indrindra'.
Ary mazava ho azy - izany ihany andiany Ecchi (izay nahagaga ny mpankafy anime toa ahy).
Fa ny hatezeram-bahoaka dia fahatezeram-bahoaka.
Tsy mbola hitanay ny zavatra farany ho avy miaraka amin'i Ishuzoku Reviewers. Ary ny fifanolanana izay ho avy ao aminy amin'ny taona 2020.
Fanarenana Junkie MMO.
Adventure hafahafa an'i Jojo.
Tafika mpamono afo.
Fandefasana poizina nataon'i RWBY, sy ny adihevitra momba ny famonoan-tena
Izany no antony tsy handravan'i SJW ny indostria anime
Ny hafatra lalina kokoa ao ambadiky ny Serivisy Fanaterana an'i Kiki (lesona momba ny fiainana)
41+ Tilikambo Fiambenana misy dikany ho an'ny mpankafy ny andian-dahatsoratra
Dr. STONE handeha ho any Crunchyroll ao anatin'ny vanim-potoana simulcast fahavaratra (NEWS)
Fanononana Anime Anime momba ny fahombiazana hanomezana anao tosika fanampiny
Teny higurashi mahery 12 izay tsy hay hadinoina
Anime Cancult Ny kolontsaina dia efa maty tsimoramora fa azo antoka, izany no antony
Ireo mpandray anjara Anime 21+ tsara indrindra mitete avy amin'ny loha ka hatrany amin'ny rantsan-tongotra
MyAnimeList MANDEHA 8+ ora, mino ny olona fa hanome tsiny ireo mpankafy Nux Taku
Sarimihetsika Anime 50+ ho avy havoaka amin'ny faramparan'ny taona 2019/2020!
Ny lisitra fampihorohoroana lehibe indrindra amin'ny resonance quotes izay mihalalina!
ny anime lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra